Deparmantiin mana fayyaa Iowa guyyaa har’aa nama Covid-19 haarawa due 19 fi nama haarawa qabame 412 | KWIT
Akka gabaasa state Crawford County keeessatti namni baayen akka corona virus qabamanii jiran gabaasan.
Guyaa har’aa se’aati 1 p.m irraa jalqabee Woodbury County keessati talaali corona virus laamu jiraattoni 7,687 ta’an fudhatani jiran, akkaata gabaasa state tti. Kunis jiraattota irraa parsantii 8 kan ta’aniidha.
Ogeessi fayyaa deparmantii State akka jedhetti virus corona haarawa kan United Kingdom keessati argamee ture amma South Dakota keessati akka argame gabaasani jiran. Ogeessi fayyaa akka jedhetti kan qabame nama lama yoo tau jaratti manatii keesati yaalamu jiru. State Secretary kan fayyaa akka jetteti deparmantiin isii “closely monitoring” virus ammaa kana irrati akka hojataa jiran himte.
South Dakota health officials guyaa hara’a akka gabaasaniti namni haarawa guyaa har’aa qabame 203 dha, kunis lakkoofsa waliigala qabame gara 114,163 dabalee jira akka dhukubni kunn jalqabe irraa.
Jiraatoni Iowa gurraachi cancer irraati kan baayatu fi kan du’uu warraa olla caala akka baayatan himan, akkaata gabaasa research University Iowa ti. Sababa cancer ummaani gurraacha kan due parsantiin yoo kaahame 25% ummata adii irra guddata, akkaata gaabasatti.
Dr. Mary Charlton, professor epidemiology kan Ul’s College public Health fi barataa Co-authors kan tae akka jedhetti, garaagarummaan isaa waaye jibbaa bifaa irrati kan hundaaedha jedhan.